आयो अनुशासनको मार्कसिट: को हो विश्वकपमा सबैभन्दा अनुशासनहीन टीम ? – Everest Dainik – News from Nepal
मस्को । रुसमा जारी विश्वकप फुटबलमा यो संस्करण ३२ टिम सहभागी थिए । खेल १४ जुनबाट शुरु भएको थियो । प्रतियोगितामा अब मात्र ४ टिम बाँकी छन् । चार टिमबीच पनि भोली (सोमबार) र पर्सि (मंगलबार) फाइनल प्रवेशका लागि भिडन्त हुने छ ।
अहिलेसम्म भएका खेलको कुरा गर्ने हो भने कोलम्बिया सबैभन्दा बढी अनुशासनहीन टिम भएको खुल्न आएको छ । उसका एक खेलाडीले रातो र ९ खेलाडीले पहेँलो कार्ड पाएका छन् ।
हुन त स्विट्जरल्याण्डका खेलाडीले पनि यति नै रातो र पहेँलो कार्ड पाए । तर कम फउलका कारण उसमा कोलम्बियाको जस्तो दाग भने लागेन ।
सबैभन्दा बढी फउल गर्नेमा आयोजक राष्ट्र रुस नै अगाडी रह्यो । क्वाटर फाइनलमा क्रोएसियासँग हारेको रुसका ६ खेलाडीले पहेँलो कार्ड पाएका थिए । उसका मिडफील्डर यूरी गैमिनस्काइले २ पटक पहुेँलो कार्ड पाएका थिए ।
आज फ्रान्स र बेल्जियमको भिडन्त, को बलियो ? इतिहास यस्तो छ
क्रोएसियाले पायो सबैभन्दा बढी पहेँलो कार्डः
जारी विश्वकमा क्रोएसियाका १२ खेलाडीले अहिलेसम्म पहेँलो कार्ड पाइसकेका छन् । पर्सि उसले सेमिफाइनलमा पूर्वविजेता इंग्ल्याण्डसँग खेल्ने छ । क्रोएसियाका खेलाडीले जारी विश्वकमा ७८ फउल गरेको छ । एक फउल पेनाल्टीमा पनि बदलिएको थियो ।
यस्तै, अर्जेन्टिना र पनामाले समान ११ ११, दक्षिण कोरियाका १० खेलाडीले पहेँलो कार्ड पाएका छन् । यी तीन वटै टिमका २–२ खेलाडीले २–२ पटक पहेँलो कार्ड पाएका थिए । जारी विश्वकमा हालसम्म २०५ पटक पहेँलो कार्ड दिइएकको छ । यो संख्या २०१४ को भन्दा २४ ले बढि हो ।
साउदी अरबलाई केवल १ पहेँलो कार्डः
यो पटकको विश्वकमा एशियाली राष्ट्र साउदी अरबले सबैभन्दा कम एउटा मात्रै पहेँलो कार्ड पाएको छ । उसको मिडफील्डर तासीर अलजासिमले एक मात्र पहेँलो कार्ड पाएका थिए । कम फउल गर्ने मामलामा साउदी दोस्रो स्थानमा रह्यो । उसका खेलाडीले ३० फउल गरेका थिए । एजेन्सी
ट्याग्स: discipline, Fifa word cup 2018, fouls, red cards, yellow cards